Shiinaha Gray Cenosphere Fly Ash White Cenosphere Qiimaha warshadda Walxaha aan dabci karin iyo alaab-qeybiyeyaasha |Hubang
Halabuurka kiimikaad ee Cenosphere(tuul sabbaynaysa) ayaa u badan silica iyo aluminium oxide, kaas oo leh astaamo badan sida qayb ganaax ah, godan, miisaan fudud, xoog sare, iska caabin xidhid, iska caabin heerkul sare ah, dahaarka, dahaarka iyo ololka retardant.Waa mid ka mid ah alaabta ceeriin ee si weyn loogu isticmaalo warshadaha dabka.
Cabbirka: 60-200 mesh
1. Qalabka dahaadhka dabka u adkaysta
2. Qurxinta dhismaha, laami heer sare ah, saqafka biyuhu aanay biyuhu lahayn iyo dahaarka kulaylka, injineernimada waddooyinka, asphalt la beddelay, iwm;
3. Warshadaha saliida: sibidhka goobta saliida, dhuumaha kahortaga daxalka iyo kulaylka, kaydka saliida badda hoosteeda, aaladaha sabbaynaya, qodida ceelasha dhoobada, dhuumaha gudbinta saliida iyo gaaska, iwm.
4. Buuxiyaha firfircoonida caaga ah, heerkulka sare iyo dahaarka cadaadiska sare, iwm;
5. Rinjiga, khad, xabagta, dahaarka qarsoodiga ah, rinjiga dahaarka, rinjiga lidka ku ah, rinjiga sagxada, rinjiga heerkulka sare u adkaysta, rinjiga gudaha iyo dibadda, rinjiga kuleylka kuleylka, rinjiga sagxada, rinjiga baabuurta, dambaska atomiga, iwm;
6. Goynta baabuurta, guddiga qalabka, qolofka qalabka guriga, marawaxad, af-hayeenka, laambada ugu muhiimsan, shubista, qalabka, qaab-dhismeedka, siibadaha, tuubada, saxan, iwm;
7. Dhammaan noocyada alaabta FRP, marmar macmal ah, maraakiibta FRP, farsamada gacanta, iwm;
8. Qalabka buuxinta iyo buuxinta beddelka, qalabka elektarooniga ah ee baakadaha, iwm;
9. Birta xumbo waxa laga sameeyaa biraha fudud sida aluminium iyo magnesium.Marka la barbar dhigo daawaynta matrixka, walxaha isku dhafan waxay leeyihiin sifooyinka cufnaanta hoose, xoog gaar ah oo sarreeya iyo qallafsanaan sare, hantida qoyaanka wanaagsan iyo xirashada caabbinta.
Hore: Organic Bentonite
Xiga: Budada Bariite
Microspheres Ceramic Hollow Microspheres/ Cenos Tayada Sare